Nepal Deep | शीर्ष नेताहरुको दशैं, कहाँ र कसरी मनाइँदै?
शीर्ष नेताहरुको दशैं, कहाँ र कसरी मनाइँदै?
बुधबार, असोज २७ २०७८
काठमाडौं। हिन्दुहरुको महान चाड दशैं यतिबेला धुमधामसँग मनाइँदैछ । राजधानी काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका सर्वसाधारण आफ्नो गाँउ घर फर्किइसकेका छन् । मान्यजनको हातबाट टीका र जमरा ग्रहण गर्न नेतादेखि सर्वसाधारण आफ्नो घरमा जम्मा हुन्छन् । यो वर्ष राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले कहाँ र कसरी दशैं मनाउँदै छन् ?
सत्ता साझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि यो वर्षको दशैं काठमाडौंको कोटेश्वरस्थित निजी निवासमा मनाउनुहँदैछ । ‘उहाँले परिवारलाई टीका लगाइदिनुहुनेछ भने, उहाँले सानीआमा शान्ता नेपाल र दाजु कृष्णकुमार नेपालको हातबाट टीका लगाउनुहुन्छ । परिवारहरुलाई टीका लगाउने यस्तै सामान्यरुपमा दशैं मनाउनुहुनेछ,’ नेपालको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निजी सचिवालयका अनुसार यो वर्षको दशैं ललितपुरको खुमलटारमा नै पारिवारिक भेटघाटमा बिताउँदै हुनुहुन्छ । ‘दशैंमा अरु के हुनु र ? टीका वा त्यस्तो तामझामभन्दा पनि सधैं झैं सामान्यरुपमा पारिवारिक सदस्यहरुको भेटघाट बढी महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ । सबैजना सँगै बस्यो, खायो अनि छलफल ग-यो । दशैंमा पहिलेदेखि नै त्यस्तो विशेष गर्ने गर्दैनौं ।’, ।
सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका दशैं पनि बोहोराटारस्थित निजी निवासमा नै बित्ने भएको छ । ‘दशैंको मेरो खासै केही छैन । मेरो पनि घरमा त्यस्तै (जुठो) परेको भएर यसवर्ष मेरो दशैं छैन । अब त्यस्तै हो, साथीहरुसँग भेट्छु, काँग्रेस महाधिवेशन चलिरहेको छ, यसरी नै बित्छ,’ पौडेल बताउनुहुन्छ ।
सत्ता साझेदार दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर दशैंको लागि आफ्नो क्षेत्र महोत्तरी जाँदै हुनुहुन्छ । ‘मेरो आफ्नो घर छैन । आफ्नो क्षेत्रमा जान्छु, साथीहरुले जहाँ–जहाँ घुमाउछन्, त्यही घुम्छु । मधेशमा घटस्थापनादेखि देवी र शक्ति पीठहरुमा जात्रा–पूजा शुरु भइसकेको छ । देवीको दर्शन गरेर दशैं मनाउछु ।’, ठाकुरले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबरा भने दशैं मनाउनको लागि असोज २५ गते नै भारतको नयाँ दिल्ली गइसक्नुभएको छ । ‘उहाँ प्रत्येक वर्ष नै दशैंका लागि दिल्ली जानुहुन्छ, यो वर्ष पनि सोमबार बिहान ११ बजे दशैंका लागि दिल्ली गइसक्नुभयो,’ उहाँको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।